Isipinashi | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Sakhetha izinhlobo ezinhle zesipinashi
Isipinashi yisitshalo saminyaka yonke esiyi-herbaceous esivela emndenini wase-Amaranth, futhi ekuhlukanisweni okudala kuyisitshalo se-Mare. Isipinashi somlomo singafinyelela ukuphakama kwamamitha angu-35 kuya ku-40. NgoJulayi, izimbali ezincane eziluhlaza ziqala ukwakha ezitshalweni, okwathi ngokuhamba kwesikhathi ziphenduke izithelo ezinqamule ezifana namantongomane.
Izindlela zokuvuna isipinashi ebusika
Ochwepheshe emkhakheni wokudla okunomsoco batusa ukufaka isipinashi ekudleni kwakho njengendlela yokugcina intsha nokukhuthaza impilo. Lesi sitshalo simane nje sisitolo sezinto eziwusizo ezisiza umzimba ukuba usebenze u-100%. Kodwa-ke, uma esikhathini sasehlobo akuyona inkinga ukuthola imifino isipinashi, bese ebusika amaqabunga awo amasha awanamaphutha.
Isipinashi se-Strawberry kanye nezici zayo ezikhulayo
Lesi yisitshalo esiwusizo kakhulu futhi esibaluleke kakhulu. Igama laso lesayensi lingu-mary, eliningi-leaved, kodwa libizwa nangokujwayelekile yummy isipinashi-okusajingijolo ,. Ngesikhathi esifanayo kubonakala sengathi isipinashi, sitrobheli kanye nokusajingijolo. Ukuthandwa kwesitshalo kuye kwaba ukubukeka okungajwayelekile futhi kunenzuzo enkulu emzimbeni womuntu.